Linux Mint 19.1 Tessa kwupụtara, Na-abịa na November ma ọ bụ Disemba 2018 | Site na Linux
Ihe oru Linux Mint taa kwuputara aha njirimara na oge ịtọhapụ oge nke nghazi mmezi mbụ ya maka Linux Mint 19 usoro, Mint Linux 19.1.
Dabere na Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver na-adịbeghị anya, A ga-akpọ Linux Mint 19.1 Tessa ma chere na ọ ga-abịa na ngwụsị November ma ọ bụ mmalite Disemba, dị ka Clement Lefebvre si kọọ.
Lefebvre kwukwara na Linux Mint 19.1 Tessa ga-enwe nkwado maka afọ ise, rue 2023, na ndị Linux Mint 19 Tara ndị ọrụ ga-enwe ike imelite ụdị nke ọhụrụ a site na iji ngwaọrụ melite gụnyere na sistemụ ahụ.
"Ntinye nke abụọ na Linux Mint 19.x usoro a ga-akpọ Tessa, a ga-ewepụta ya na Nọvemba ma ọ bụ Disemba nke afọ a ma kwadoo ya ruo 2023," Clement Lefebvre dere na post na mbido taa.
Linux Mint 19.1 Tessa na-abịa na Cinnamon 4.0
N'etiti ọtụtụ ndozi na ozi ọma ga-abịa na Linux Mint 19.1 Tessa, anyị nwere ike ịkọwa ya nsonye nke Cinnamon 4.0 eserese na gburugburu ebe obibi, yana ihe eji agagharị na ngwanrọ Software - Sources Software - na Xapp sidebar na aha akwukwo.
Ngwaọrụ sọftụwia ga - enwe ngalaba maka “Nhọrọ ederede”, Nakwa nhọrọ ọhụrụ ka ndị ọrụ nwee ike ịgbakwunye ebe nchekwa ha na-enweghị oke nsogbu, na-emegharị mkpebi nke ndị mmepe nke Ha kwesịrị ịkwaga akara akara akara na ebe nchekwa dbgsym.
A ga-emelitekwa ederede ndabara Mint-y Mgbe Linux Mint 19.1 Tessa bịarutere, a ga-eme ka ọdịiche ahụ dịkwuo mma site na ime ka agba dị n'okirikiri na-agba ọchịchịrị, nke ga-eme ka aha ahụ pụta ìhè, dị ka ndị ọrụ obodo rịọrọ. A ga-ewepụta nkọwa ndị ọzọ na ụdị Linux Mint ọzọ na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Linux Mint 19.1 Tessa kwupụtara, na-abịa na November ma ọ bụ Disemba 2018